Confirmation email for vaccine rewards - SOMALI / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota
CONFIRMATION - Somali
Mawduuca: Waad ku mahadsan tahay isdiiwaangelinta tallaalka ee xilliga kuleylaha (Summer)!
Gacaliye [MACLUUMAADKA TALLAAL QAATAHA],
Waad ku mahadsan tahay isdiiwaangelinta tallaalka ee barnaamijka abaalmarinta xilliga kuleylaha (Summer)! Waxaan dibu eegeynaa macluumaadkaaga. Haddii ay iswaafaqaan rekoorkeenna oo aad ka mid tahay 100,000 ee reer Minnesota ee ugu horreeya ee ka soo jawaaba, waxaan kuu soo diri doonnaa faahfaahinta sheegashada abaalmarintaada.
Si loo xaqiijiyo inaad hesho abaalmarintaada, fadlan hubi cinwaankaaga boostada ee hoose. Haduu khaldan yahay, fadlan mar kale soo gudbi dalabka abaalmarintaada.
Waad ku mahadsan tahay qaadashada tallaalka! Ha iloobin inaad u sheegto asxaabtaada haddii ay qaataan tallaalka koowaad bisha Juun dhexdeeda, iyaguna, waxay xaq u yeelan karaan inay helaan abaalmarin.
Waqtiga iyo taariikhda la gudbiyey: